musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Toronto kuenda kuOrlando nendege paSwoop izvozvi
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Kanada Breaking News • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau
Yekutanga kubhururuka kubva kuToronto Pearson International Airport inoratidzira nhanho inonakidza kune yakakwira-isingadhuri ndege yendege sezvo ichikura US network.
Kutangisa kwanhasi kwakabvisa yekutanga yemana nzira dzisiri dzekumira kuenda kuOrlando Sanford International Airport kune iyo yakakwira-yakachipa ndege.
Yekuvhurisa yendege inodhura-yakachipa yakasimuka kubva kuToronto Pearson International Airport na8: 00 am EST uye yakasvika zvakachengeteka pa11: 00 am nguva yemuno.
Swoop iri pachinangwa chekuita kuti kufamba kuve kwakachipa uye kuwanikwe kune vese maCanada.
Nhasi, Swoop yakapemberera ndege yayo yekutanga kuenda Orlando Sanford International Airport. Yekuvhurisa yendege inodhura-yakachipa yakasimuka kubva kuToronto Pearson International Airport na8: 00 am EST uye yakasvika zvakachengeteka pa11: 00 am nguva yemuno.
"Tiri kufara nekukudza network yedu yeUS nekuparura kwendege yanhasi yekutanga ku Orlando Sanford International Airport, "Akadaro Shane Workman, Head of Flight Operations, Swoop. "Tinoziva kuti maCanada anoshuvira kuenda kumaodzanyemba kune zuva kuFlorida munguva ino yechando uye mukana weOrlando Sanford International Airport, kuwanika uye kuswedera kune zvinokwezva zviri padyo zvinoita kuti ive gedhi rakanaka kunharaunda iyi."
Kutangisa kwanhasi kwakadzinga yekutanga kune ina mitsva nzira dzisingamire kuenda Orlando Sanford International Airport kune iyo yakakwira-yakaderera-mutengo ndege. Mumwedzi iri kuuya, Swoopbasa rekuwedzera risingamire kuOrlando Sanford rakagadzirirwa kutanga kubva kuHamilton, ON, Winnipeg, MB uye Edmonton, AB.
Tsanangudzo yebasa raSwoop kuOrlando Sanford
Nzira Yakarongwa Kutanga Zuva Peak Yevhiki nevhiki Frequency
Toronto (YYZ) - Orlando Sanford (SFB) October 9, 2021 3x Vhiki
Hamilton (YHM) - Orlando Sanford (SFB) November 1, 2021 2x Vhiki
Edmonton (YEG) - Orlando Sanford (SFB) December 3, 2021 2x Vhiki
Winnipeg (YWG) - Orlando Sanford (SFB) December 10, 2021 2x Vhiki
Swoop ndeyeCanada yekudhura yakachipa-mutakuri yeWestJet. Yakaziviswa zviri pamutemo musi waGunyana 27, 2017, uye yakatanga nendege musi wa20 Chikumi 2018. Iyo ndege inogara muCalgary uye yakapihwa zita mushure mekuda kweWestJet "kukwira" mumusika weCanada nemhando nyowani yebhizinesi.